WARBIXIN: Muslimiinta oo la yaabban Sucuudiga oo masaajiddii la nuxuusinayo muusiggiina la noolaynayo | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka WARBIXIN: Muslimiinta oo la yaabban Sucuudiga oo masaajiddii la nuxuusinayo muusiggiina la...
WARBIXIN: Muslimiinta oo la yaabban Sucuudiga oo masaajiddii la nuxuusinayo muusiggiina la noolaynayo
(Riyaad) 01 Juun 2021 – Mas’uuliyiinta dalka Sacuudi Carabiya ayaa ku adkeysanaya tallaabo ay ku xaddideen sameecadaha masaajidda oo ahayd in aan laga maqlin meel ka baxsan gudaha masaajidda.
Qoraalka Codka,Sucuudiga oo dumarka u ogolaaday in ay gawaarida wadaan
Dhaxal sugaha Sucuudiga Maxamed Bin Salmaan ayaa soo kordhiyay isbadelo ay ka midyihiin in muusiga uu banaanyahay
Maxamed Bin Salmaan
Dhaxalsugaha awoodda badan ee Sucuudiga Maxamed Bin Salmaan ayaa soo kordhiyay isbadelo xagga dhaqanka bulshada ah, sida in uu fasaxay muusigii iyo heesihii mudada dheer mamnuuca ka ahaan jirey dalkaasi oo ay ku yaalaan labo ka mid ah saddexda goobood ee ugu barakaysan dunida muslimka.
Qorshahaas ayaa sidoo kale dhigayay in wax laga baddalo hannaanka waxbarashada, isla markaana la kordhiyo doorka ay haweenka ku leeyihiin shaqooyinka, sidoo kalena la maalgaliyo ganacsiga iyo madadaalada, si shaqooyin loogu abuuro dhallinyarada.
Marka la eego Sacuudiga dibaddiisa, dad kooban ayaa yaqaannay magaca Maxamed Bin Salman Aala Sucuud, ka hor inta uusan aabihiis boqorka noqonin sannadkii 2015-kii. Balse hadda, 33 jirkan dhaxal sugaha boqortooyada ah waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay qofka rasmiga ah ee gacanta ku haya maamulka waddanka dhoofiya saliidda ugu badan ee caalamka.
Bishii Abriil ee sannadkii 2017-kii ayey boqortooyada ku dhawaaqday qorshe ku aaddan in la sameynayo magaalo ay baaxaddeeda le’eg tahay 334 sq km (129 sq mile) oo loogu tala galay madadaalada.
Magaaladaas ayaa la sheegay in laga dhisi doono cirifka magaalada Riyaad, ayna yeelan doonto howlo isugu jira dhaqanka iyo ciyaaraha – oo ay u sii dheer tahay xarun loo dalxiis tago oo lagu xannaaneeyo xayawaanka.
Previous article”Waxaa ii jooga wiilal Muqdisho ka yimid!” – MW Uganda oo waabsi nooc cusub ah ku bilaabay dadkiisa
Next articleWasaaradda Warfaafinta oo soo bandhigtay magacyada xubnaha Guddiyada Doorashada ee laga dacwoodey